Xaflad lagu saxiixayo Heshiiskii ay gaareen Maamullo Carbeed iyo Yahuudda oo ka socota Maraykanka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xaflad lagu saxiixayo Heshiiskii ay gaareen Maamullo Carbeed iyo Yahuudda oo ka socota Maraykanka.
On Sep 15, 2020 250 0
Wararka ka imaanaya magaalada Washington ee caasimadda wadanka Maraykanka ayaa ku waramaya iney socdaan diyaar garow ku aadan saxiixa heshiiskii dhawaan dhexmaray dowaladaha Imaaraatka Carabta iyo AlBaxreyn oo dhinac ah iyo maamulka Yahuudd ee xooga ku heysto dhulka muslimka ah ee Filastiin.
Masuuliyiin ka socda dowladaha Imaaraatka, AlBaxreyn iyo maamulka Yahuudda ayaa ku sugan aqalka cad ee looga taliyo wadanka Maraykanka, waxaana bilaaban doona goordhow xaflad lagu saxiixayo heshiiska, islamarkaana loogu dabaal degayo in maamullo carbeed ay si muuqata heshiis ula gaareen markii ugu horeysay maamulka Yahuudda.
Wasiirada arimaha dibadda ee Imaaraatka Carabta iyo AlBaxreyn ayaa ku sugan magaalada Washington, kuwaas oo dhankooda saxiixi doona heshiisak, iyadoona dhanka Yahuudda ay ka joogaan wufuud sare .
Qodobada heshiiska oo faafahsan ayaa lagu soo waramayaa in la shaacin doono markii ugu horeysay, kadib saxiixa heshiisak, waxaana masuuliyiin katirsan maamulka Yahuudda oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in qodobada heshiiska ay yihiin kuwa xasaasi ah oo aan la shaacin karin ka hor inta aan la saxiixin.
Dowladda Maraykanka ayaa gar wadeyn ka ah ololaha lagu iclaaminayo xiriir toos ah oo dhexmara maamullada Carbeed iyo Yahuuda xooga ku heysta dhulka muslimka ah ee Filastiin, waxaana tallaabooyinka ayn Aqoonyahannada muslimiinta ah ku tilmaameen mid lagu doonayo in looga tanaazulo qadiyadda Filastiin, si toos ahna Yahuudda loogu wareejiyo.